जंगल को फोटोहरु
सायद कसैले कसैलाई जो कोही जंगलमा राख्न चाहँदैनन् भने, हरियो पथसँगै हिड्नको आनन्द लिनुहोस्, चराहरूको गीत गाऊन्, सुन्दर प्रकृतिलाई शहरको हलचलबाट टाढा राख्नुहोस्। तथापि, शहरहरूको आधुनिक बासिन्दाहरूले प्रकृतिसँग यस्ता संचार खर्च गर्न सम्भव छ। शायद यही कारणले गर्दा धेरै शहरीहरूले आफ्नो अपार्टमेन्टलाई वास्तविक प्रकारको सर्टिफिकेटको साथमा सजाय गर्छन - वन वालपेपरको तस्वीर फोटो वालपेपर।
जंगल वा पहेंलो शरद ऋतुको संतृप्त हरित घाटी र रूख जसले कोठामा पर्खाल लगाएर आत्मालाई झगडा गर्छ र आँखालाई सुखी बनाउँछ, तपाईंलाई आराम गर्न वा तनावलाई समेत मुक्त गर्न दिन्छ। फोटो वालपेपरको सहयोगको साथ, यो एकदम अनोखी र मौलिक कोठामा एक सानो कोठा बदल्न सम्भव छ। जंगलको छविको साथ वालपेपरको वर्गीकरण साँच्चै विविध छ, त्यसैले तपाई एक परिदृश्य चयन गर्न सक्नुहुनेछ जुन कोठाको कुनै पनि डिजाइनको गुणलाई जोड दिनेछ।
आन्तरिक मा पर्खालको कागज बांस वन
बांस वनको चित्रको साथ वाल-पेपरहरू प्रायः कोठाको कोठामा प्रयोग गरिन्छ। र उनीहरूले अझ राम्रो देखिन्छ जहाँ साना फर्नीचर र अन्य सजावटी तत्वहरू छन्। वालपेपरमा विभिन्न आकारका धेरै ठाडो प्रकारको ध्यान आकर्षित हुन्छ।
पाइन जंगलको फोटोहरू
पाइन जङ्गल प्रायजसो वालपेपरमा सूर्य द्वारा स्पष्ट को रूपमा चित्रण गरिएको छ। मशरूम, सुन्दर बम्पहरू, एक रूख शाखामा गिलिरेल - यो सबै कथा असामान्य र ताजा बनाउँछ। त्यसकारण, दुबै कोठाको लागि उपयुक्त वालपेपर, र भान्साको लागि र भित्ताका लागि पनि।
सामान्य रङ्ग योजनामा ​​निर्भर गर्दछ, तपाइँ "मौसमी" वनको साथ वालपेपर चयन गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, पर्खाल-पेपर वसन्त वन जङ्गलको प्रतीक हो, त्यसकारण तिनीहरू शयनक्षेत्रको लागि उपयुक्त छ।
शरद ऋतु जंगलको फोटो वालपेपर लिङ्ग कोठामा राम्रो देखिन्छ, भित्ता र सुनको रङको साथमा भित्ता भित्र। विशेष गरी उपयुक्त भित्री फर्नीचरको साथ कोठाको लागि वालपेपर हो।
सर्दिया जङ्गलको चित्रण गर्ने फोटो वालपेपरहरू सार्वभौमिक हुन् जुन सेतो रङले तिनीहरूलाई हावा दिन्छ। त्यसकारण, कुनै पनि डिजाइनमा त्यस्ता वालपेपर उपयुक्त छ।
भान्सामा, गर्मीको जंगलको वलपेपर उज्ज्वल जामुन र मशरूमसँग पूर्ण रूपमा आन्तरिक रुपमा फिट हुनेछ।
रेत-ब्लाउड डिजाइनको साथमा अलमारियाँ
छतमा पीवीसी प्यानलहरू
फूलहरूको लागि खडा हुनुहोस्
बच्चाहरु को कोठा को लेआउट
छतको लागि डायोड टेप
काठबाट बनाइएको विन्डो-सिईल
आन्तरिक मा पलेटहरू
छतको आवरण कसरी गर्ने?
आफ्नै हातले तालिका तालिका
गजबको लागि पर्दा - कुन छनौट राम्रो छ?
जिप्सम बनाइएको कुखुराहरू
छत रिचर्ड फिक्स्चर
देश शैलीमा पर्दा
आन्तरिक सजावटको लागि कृत्रिम पत्थर
Endometriosis को लागि हार्मोनल तैयारी
टाउको रंगमा विवाह
यो राम्रो हुन्छ जब टमाटरहरू स्प्रे गर्न - बिहान वा साँझमा?
बच्चाहरु को स्केटबोर्ड
लुनर मैनीक्योर 2017 - उपन्यासहरु र रोचक विचारहरु को फोटो
भान्साको लागि पनरोक टुक्रा टुक्रा
कैसाब्लांका - समुद्र तट
Monstera - के म घर राख्न सक्छु?
शॉक! हामी सबै समय गलत रूपमा केक काट्छौं
आमा र छोरीहरूको 30 वटा टैटोहरू, एक अनुचित जडान साबित गर्दै!
अरब सरकारका चित्रकार क्लब - विश्व सरकार
महिलाहरु स्न्याशशर्टहरू - सबैभन्दा फैशनेबल मोडेल
सजावटी पैनल संग पर्खाल सजावट
स्ट्रबेरी - उपयोगी गुण र विनाशकारी
कील को कवक को क्रीम
Karelia - आकर्षण
बच्चामा कब्ज -2महिना